September 22, 2021 - Celegroup
သင်တစ်လဝင်ငွေ ၁၀ သိန်းရှိတဲ့ချိန်မှာ…
September 22, 2021 Celegroup1975 0
သင်တစ်လဝင်ငွေ ၁၀ သိန်းရှိတဲ့ချိန်မှာ… စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဝင်ထိုင်မိလို့ ၁/၂ သောင်းကုန်တဲ့ချိန်မှာ ဆိုင်ကစျေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ သင် Social Media ပေါ်မှာတင်ပြီးပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး သင်တစ်လဝင်ငွေ သိန်း ၁၀၀ ရှိတဲ့ချိန်မှာ… LV brand ဝယ်သုံးတာကို အထူးအဆန်းမြင်မှာမဟုတ်ပါဘူး သင်တစ်လဝင်ငွေ သိန်း ၁၀၀၀ ရှိတဲ့ချိန်မှာ… BMW ကားအကောင်းစားဝယ်စီးတာကို ပုံမှန်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပဲလို့ သင်မြင်ပါလိမ့်မယ် ဘယ်အရာမဆို Level ရှိပါတယ်။ လူ့ဘဝလဲတူတူပါပဲ သဘာဝကိုက ခွဲခြားထားပြီးသားပါ။ Game ကစားရင်လဲ […]
နှုတ်ချိုတိုင်း မသာယာလိုက်နဲ့( ၁ မိနစ်လောက် အချိန်ပေးပီး ဖတ်ပေးပါ )
နှုတ်ချိုတိုင်း မသာယာလိုက်နဲ့ တခါက ကျီးကန်း တကောင်ဟာ အိမ်တအိမ်က ဒိန်ခဲ တတုံးကို ခိုးယူ ကိုက်ချီပြီး သစ်ပင် တပင်ပေါ်မှာ နားနေတယ် ။ ဒိန်ခဲရဲ့ အနံ့ကို ရတဲ့ မြေခွေး တကောင်ဟာ ကျီးကန်းနားသို့ နီးကပ်စွာ လာလေတယ် ။ ပြီးတော့ မြေခွေးဟာ အဲဒီ ဒိန်ခဲတုံးကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ အကြံထုတ်ကာ တွေးတော နေပါတော့တယ် ။ အဲ့ဒါနဲ့ မြေခွေးဟာ.. ” […]
တောင်ကိုးရီးယားလူမျိုးတွေဟာ ထမင်းစားရင် ဘာလို့ ထမင်းကို ပန်းကန်လုံးလေး တစ်လုံးစာကိုပဲ ထည့်စားပါသလဲ…? ဆိုင်တွေမှာ ရောင်းရင်လည်း ထမင်း တစ်ပွဲစာဟာ တစ်လုပ်စာ သာသာမျှသာရှိတဲ့ ပန်းကန်လုံးလေး တစ်လုံးစာပဲ ရှိပါတယ်။ ဒါဟာဘာလို့လဲဆိုရင် ကိုးရီးယားတွေဟာ ထမင်းကို အရမ်းတန်ဖိုးထားလို့ပါ။ ဆိုင်တွေမှာ ရောင်းရင်လည်း ထမင်း တစ်ပွဲစာဟာ တစ်လုပ်စာ သာသာမျှသာရှိတဲ့ ပန်းကန်လုံးလေး တစ်လုံးစာပဲ ရှိပါတယ်။ ဒါဟာဘာလို့လဲဆိုရင် ကိုးရီးယားတွေဟာ ထမင်းကို အရမ်းတန်ဖိုးထားလို့ပါ။ ဒီပန်းကန်လုံးလေးထဲက ထမင်းဟာ […]
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လူတွေ သိပ်မသိသေးတဲ့ သမိုင်းကြောင်းတခု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လူတွေ သိပ်မသိသေးတဲ့ သမိုင်းကြောင်းတခု (မြန်မာတွေအတွက် ဂုဏ်ယူစရာပါ) အိုး ဗျာ တစ်ကယ်ကြီး ကြည့်ကြစမ်းပါဗျာ ဂုဏ်ယူစရာကောင်းသော မြန်မာပါလား အမေစု..ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂမှာ အတွင်းရေးမှုး တာဝန် တစ်နေရာထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ်က ကဒ်ပြားပါ…. မမြင်ဖူးသေးသူများအတွက်တင်ပေး လိုက်တာပါ။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ဘတ်ဂျက်ရေးရာ စီမံခန့်ခွဲဌာနမှာ လုပ်ခဲ့တာလို့ အချက်အလက်တွေ ဖတ်ခဲ့ရပါတယ် ဦးသန့် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် ကာလမှာ ၃ နှစ်တိတိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာလို့ […]
ကလေးရှိတဲ့အိမ်တိုင်း ဒီရွက်လှပင်ကို လုံးဝ မစိုက်သင့်တဲ့အကြောင်းအရင်း
ပိုက္ဆံမရွိဘူးလို႔ ပါးစပ္က အၿမဲေျပာေနသူေတြအတြက္ မွ်ေဝေပးလိုက္ပါၿပီ
VPN ဖြုတ်ပြီး သုံးတော့မယ်ဆိုရင် ဒီစာလေးကို ပြီးအောင်ဖတ်ပေးပါ…
“ဖိုက်တာအားလုံး သတိ။ အရေးကြီးပါတယ်,..အခု …..VPN မပါပဲ တချို့ FB လိုင်းတွေကြည့်လို့ရပါပြီနော်(လုံးဝ မဖြုတ်နဲ့) VPN ဖြုတ်ပြီး သုံးတော့မယ်ဆိုရင် ဒီစာလေးကို ပြီးအောင်ဖတ်ပေးပါ။ Tracing လိုက်ဖို့ လုပ်နေတယ်လို့၊ Firewall အတွက် လုပ်နေတယ်လို့လည် ယူဆခဲ့တယ်။ အခု VPN မပါပဲ ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာ…အပိုင်လုပ်တာနော်…။ Tracing လိုက်ဖို့ တိကျတဲ့ အိုင်ပီလိုပါတယ်။ VPN နဲ့ဆို အားလုံးက စင်ကာပူ၊ ယူအက်စ်၊ ကနေဒါအကုန်မှာရှိနေတာပါ။ […]
သတိမထားမိတဲ့ လူသိနည်းသော နိမိတ်များ – ၃
သတိမထားမိတဲ့ လူသိနည်းသော နိမိတ်များ – ၃ ၁။ အိမ်ရှေ့ တရော်ထုပ် မချိတ်ပါနှင့်။ အိမ်ရှိလူများ ကျမ်းမာရေး ညံ့တတ်၏။ ၂။ စားပွဲပေါ် ဖိနပ် မတင်ပါနှင့်။ ဖိနပ်ပိုင်ရှင် ထိုအိမ်မှ ထွက်ခွာသွားရတတ်၏။ ၃။ ဓါး ကတ်ကြေး လက်ဆောင်မပေးပါနှင့်၊၊ ကိုယ့်လာပေးလျှင်လည်း ငွေအနည်းငယ် စတိ ပြန်ပေးပါ။ ထိုသူနှင့် ဆက်ဆံရေး အဆင်မပြေဖြစ်ပြီး လမ်းခွဲရတတ်၏။ ၄။ ကတ်ကြေး မကစားပါနှင့်။ ကံဆိုးခြင်းကို […]